XIRIIRKA IYO GUURKA Archives - Page 3 of 79 - Aayaha
Aayaha editorJuly 14, 2020
8 Xikmadood Oo Ku Tusaya Nooca Ninka Ay Noloshaada U Baahantahay
1. Ninka wanaagsan ma shukaansado gabadha ugu quruxda badan dunida- wuxuu shukansadaa gabadha nolosha uga digtaa mid qurux badan“ 2.…
Aayaha editorJuly 13, 2020
Dadka qaarkood iskama saaraan xasuusta lamaanahoodii hore ama xittaa dareenka waqtiyadii ay lasoo qaateen qofkaas kahor inta aysan qof kale…
Waa wax iska caadi ah in lamaanuhu dagaalamaan balse haddii dagaalku heerarka qaar gaaro ama noqdo xad kabax guurku wuu…
Aayaha editorJuly 12, 2020
Waxaa jiraan waxyaabo gaar ah oo raggu sameeyaan kuwaas oo waalli ku rida haweenka. Waa kuwaan qaar kamid ah waxyaabaha…
Waa waajib saaran ninka ragga ah inuu kasoo baxo baahiyaha xaaskiisa. Ragga qaarkood way iska indha tiraan inay waajibaadkaas kasoo…
Aayaha editorJuly 10, 2020
3 Waxyaabood Oo Ragga Aysan U Sheegin Haweenka Ay Jecelyihiin Iyo Sababta
Marka ay timaado furitaanka ama ka hadalka waxyaabo kala duwan oo quseeya xiriirka, waxaa jiraan waxyaabo ragga ay ka weecdaan.…
Tilmaamaha Lagu Garto In Ninkaaga Uusan Dooneyn Inaad Kala Tagtaan
Maka walwalsantahay suurtagalnimada in ninkaagu qorsheynayo inaadn kala tagtaan ama uu ku furo? Mararka qaar haweenka sabab la’aan ayay u…
Miyaad dooneysaa inaad ogaato haddii qofka aad jeceshahay uu ku jecelyahay iyo haddii kale? Tani waa arrin jahwareer ku riday…
Aayaha editorJuly 9, 2020
Qalbi jilicsanaanta ama Oohinta ayaa la sheegay inay tahay hab lagu sii daayo shucuurta gudaha. Dadku way ooyaan laakiin waxaa…
Dhaqaatiirta waxay kaalin muhiim ah ka ciyaaraan bulshada sababtoo ah waxay daryeelaan oo gargaar ay u fidiyaan dadka xanuunsan. Marka…
5 ways you’re destroying your teeth without knowing it
8 Faa’ido Oo Ay Leedahay Cabitaanka Liinta